Melon varieties | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Melon varieties
Ny fampiasana zozoro maitso toy ny fanafody
Vitsy no mahalala tsara ny soa azo avy amin'ny nify, na dia efa fantatra hatramin'ny taloha aza ny fanasitranany. Ity toeram-pambolena tsy misaina ity dia any rehetra any Azia, any Caucase, izay azon'ny mponina ao Gresy sy Okraina. Ao amin'ilay lahatsoratra dia hijery ny sanda ara-tsakafo ara-tsakafo isika, hianatra momba ny tombontsoa azony, handinihana ny fomba fikarakarana sy ny fampiasana hosoka fanasitranana.
Ny tsara indrindra ho an'ny latabatrao
Melon dia solontenan'ny kolontsaina melon, karazana voankazo Gherkin. Ireo sombintsombiny ireo dia sarobidy ho an'ny tsirom-bary mahafinaritra izay hahaliana ny ankizy indrindra izay tsy te hihinana voankazo. Ankoatra ny siramamy, ny pulp melone dia misy vitamina A, C sy P, ary koa ascorbic acid, salts of iron, sodium, potassium, and fiber.
Ny karazana tsara indrindra amin'ny fiteny Okrainiana
Melon dia zavamaniry iray avy any afovoan-tany Afovoany sy Azia kely, izay lehibe kokoa any Okraina. Ny voankazo melon dia tsaramaso, sarobidy ny tsiro mahafinaritra mahafinaritra. Misy karazany maro ny melone Okrainiana. Ankoatra izay dia hitantara bebe kokoa momba ny sasany amin'izy ireo izahay. Fantatrao ve? Melon dia mangetaheta ny hetaheta, mahasoa ho an'ny olona voan'ny diabeta, cholecystitis, aretina mitaiza be loatra.
Mampitombo ny "Torpedo" melon ao amin'ny tranokalany manokana
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fahavaratra dia mifandray amin'ny melon. Miaraka amin'ny fisehony manjelanjelatra dia manampy amin'ny famafana ny sakafo efa reraky ny fahavaratra izy io ary mahatonga azy ho mahafinaritra sy mahasoa kokoa. Na dia be aza ny karazan-karazan-tsakafo isan-karazany, ny malaza indrindra amin'ny torpedo melon. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny valin'ireto fanontaniana manaraka ireto: ny fomba hampitomboana ny melon avy amin'ny masomboly izay hitomboan'ny melon, ary koa ny zava-mahaliana maro momba ity kolontsaina mahafinaritra ity.
Melon "Kolkhoznitsa": fambolena, fikarakarana ary fanoritsoritana ny voankazo
Sakafo tsara tarehy, mahavoky sy mahasalama no iray amin'ireo sakafo tena malaza indrindra amin'ny latabatra fisakafoanana amin'ny fararano sy amin'ny fararano. Ny fonosana mamy dia ampiasaina amin'ny endrika mangahazo ary ho toy ny fitaovana ho an'ny salady, zava-pisotro mamim-bary, pahaizana, sns. Ankoatra ny tsirony tsara indrindra, ny melon dia manana voka-pandrefesana tena ilaina amin'ny fomba fitsaboana nentim-paharazana sy ny cosmetology.
Ahoana ny fomba hananganana melon ao anaty fonosana polycarbonate, fananganana sy fikojakojana
Meksikanina mahasalama no mahomby amin'ny firenena manana toby mafana. Ireo mpanao zaridaina miaina amin'ny toetr'andro eo amin'ny lalam-piaramanidina dia mila manamboatra trano fonenana sy trano fambolena mba hisambotra melons, pastèques, pokontany. Na dia sarotra aza ny fahitana dia mora kokoa ny mampitombo ny vokatra melon ao amina trano fisotroana noho ny eny an-kalamanjana.
Tsiambaratelo momba ny fambolena stakhis
Sakafo mahasalama miaraka amin'ny tarragona - vahaolana mahasalama amin'ny olana ara-pahasalamana
Flower Princess - Pelargonium Clara San dia hankafizinao amin'ny hatsaran-tarehy sy ny fofona
Fandinihana ny vokatra topinambur tsara indrindra. Ny tombony sy ny fahasimbana, ary koa ny torolàlana amin'ny fampiasana takelaka
Inona no tokony hatao raha tsy mitombo ny spathiphyllum, ahoana no hamonjena ny "fahasambarana vehivavy"?
Plant Hemlock: ny endriky ny zava-mahadomelina sy ny fampiasana azy amin'ny fitsaboana
Ahoana ny famafazana menaka amin'ny katsatsaka, ny endriky ny zavamaniry maniry avy amin'ny voa
Afokon'ny bitro: Blaogin'i Vienna: singa fiompiana ao an-trano
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Melon varieties